Ciidamada Xoogga & Al-Shabaab oo ku dagaalamay Gobolka Shabeelaha Dhexe. – Banaadir Times
By banaadir 29th November 2020 118 No comment
Militariga Soomaaliya & Al-Shabaab ayaa xalay dagaal dhowr tuullo ka dhacay ku dhexmaray deegaanno hoostaga Degmada Cadale ee Gobolka Shabeelaha Dhexe sida ay Mustaqbal u xaqiijiyeen saraakiil katirsan ciidanka Xoogga.
Weerarka waxaa qaaday ciidamada Xoogga Dalka gaar ahaan qaybta 27-aad oo mas’uul ka ah sugidda ammaanka Gobollada Shabeelaha Dhexe & Hiiraan oo ka kooban dhismaha DG Hir-Shabeelle.
Dagaalka ayaa muddo socday sida ay sheegeen saraakiisha Militariga Soomaaliya qaybta 27-aad, inkasta oo aysan sheegin khasaare dhankooda gaaray & waxyeelada gaartay dhinaca Al-Shabaab.
Ciidamada Xoogga ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan kawada Gobolka Shabeelaha Dhexe, qorshaha ugu weyn ay ka leeyihiin waxa ay saraakiishu ku sheegeen in ay go’doonka uga qaadayaan degmooyinka qaar oo isu socodka Gaadiidka joogsaday.
Militariga Soomaaliya ayaa dhowr saldhig ka sameystay jidka isku xira Balcad & Jowhar, kadib markii xiliya kala duwan Al-Shabaab weerartay Mas’uuliyiin katirsan Hir-Shabeelle, Ciidamada Xoogga & AMISOM.
Madaxweynaha Jubbaland Oo Goor Dhow Soo Gaaray Muqdisho
Sawirro: Wafdi ka socda Aqalka sare oo kulan la qaatay Madaxweynaha Galmudug
By banaadir 19th September 2018